ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ အချိန်တွင် လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-5) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံတို့၏ တိုးတက်ကောင်းမွန်သော နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်များ အပြန်အလှန် လေ့လာရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နော်ဝေနိုင်ငံက ပေးအပ်လျှက်ရှိသော သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သော အကူအညီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံတို့တွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာများနှင့် ပူးပေါင်း အဖြေရှာရေး ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ပညာရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုးမြှင့်ကူညီရန် ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကော်မတီဝင် ဒေါ်ပြုံးကေသီနိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။